Hogaamiyayaal reer Europe ah oo u tegay dalka shiinaha wadahadal dhinaca dhibaatada deymaha ah – Radio Daljir
Hogaamiyayaal reer Europe ah oo u tegay dalka shiinaha wadahadal dhinaca dhibaatada deymaha ah
Beiging,Feb 14 -Hogaamiyayaal kasocda ururka midowga Europe ayaa tegay dalka Shiinaha, si ay uga qaybgalaan shir-madaxeed ka dhacaya magaalada Beijing oo lagaga hadlayo dhibaatada deymaha ee ka jirta qaarada Europe.
Reysalwasaaraha dalka shiinaha Wen Jiabao ayaa lagu wadaa in uu magaalada Beijing kula kulmo midaxweynaha midowga Europe Herman Van Rompuy iyo madaxa golaha fulinta ee midowga Europe Jose Manuel Barroso.
Iyadoo agendaha shirka ay ugu muhiimsantahay dhibaatada deymaha ee ka jirta dalalka Europe ayaa hadana lagaga hadlayaa shirka arimaha dalalka Syria iyo Iran ,waxana sidoo kale shirka lagu soo qaadayaa diidmada shiinaha ee ku aadan bixinta canshuuraha lagu soo rogay diyaaradaha isticmaala hawada dalalka ku bahoobay midowga Europe.
Mawduuca ugu muhiimsan ee shirka labada dhinac ayaa ah mashaqada maaliyadda ee ka jirta qaaradda Europe,iyo sida dalka shiinuhu uu gacan uga geysanlahaa xalinta arintaasi, islamarkaana uu bixiyo lacago ammaah ah.
Hogaamiyayaasha midowga Europe ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan madaxweynaah Shiinaha Hu Jintao maalinta arbacada ee berito.
Midowga Europe ayaa doonaya in dalka shiinuhu uu ka qaybqaato lacagaha samata-bixinta ah ee lagu maalgelinayo dalalka la dhibaataysan dhinaca deymaha ,waxana dalka Shiinuhu uu hore u sheegay in uu arintaasi tixgelin siinayo.
Shirkan ayaa imanaya, iyadoo mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee gooya xaddiga deymaha oo lagu magcaabo Moody’s, ay hoos u dhigtay xaddiga wax deynsiga ee 6 dal oo European ah ,waxana dalalkaasi ku jira Italy, Portugal iyo Spain.
Shirkadan Moody’s oo sidoo kale hoos u dhigtay aragtida wax deynsiga ee dalalka Britain iyo Australia ayaa sheegtay in ay tallaabadaasi u qaaday iyadoo eegaysa rajooyinka dhinaca dhaqaalaha ee liita ee Europe, iyo hubanti-la?aanta ka jirta khayraadka ama dhaqaalaha loo baahanyahay in la helo si arinta dhibaatada deymaha loo xaliyo.
Maalintii Axadda ahayd asbuucan ayaa baarlamanka dalka Giriiga uu meelmariyey tallaabooyin cusub oo dhinaca gunti-giijiska ah oo lagu dhimayo kharashaadka , islamarkaana lagu tashiilayo dhaqaalaha.
Dalka Giriiga ayaa isku dayaya in uu helo lacag dhan 130 billion oo Euro oo u dhiganta $170 billion oo dollar oo kabid ama samata-bixin ah ,waxana lacagtaasi ay ka imanaysaa dalalka isiticmaalaa lacagta Euro ee loo yaqaan aagga Euro iyo weliba sanduuqa lacagta ee caalamiga ah ee IMF.
Heshiishkan oo aan weli la dhamaystirin ayaa waxaa meesha lagaga saarayaa kala badh deymaha sida gaarka ah loogu leeyahay dowladda Giriiga, waxana heshiishkan ka shiraya 17ka dal ee suuqa Eurozone maalinta khamiista ah ee soo socota, laakiin dowladda Giriiga ayey tahay in ay bixiso damaanad-qaad ku aadan inaanay ka laabandoonin heshiishkan.